warkii.com » Kangan oo katagtay Mumbai xaalad amni xumo awgeyd!!!
Kangan oo katagtay Mumbai xaalad amni xumo awgeyd!!!
Kangana Ranaut ayaa ka tagtay hoygeeda Mumbai, iyadoo ku sii jeedda gurigeeda oo ku yaal Manali. Iyadoo la wadaagaysa qoraal taageerayaasheeda, Kangana waxa ay kuqortay -ka, “Qalbigeyga oo ka tagay Mumbai, sida la iigu argagaxay maalmahan oo dhan weeraro joogto ah iyo xadgudubyo ayaa igu dhacay aniga oo isku dayay in aan gurigayga katago ka dib goobtayda shaqada,anigoo ku wargeliyay kooxda amniga. ,
Kangana waxay isbarbar dhig ku sameysay Mumbai iyo Pakistan cida heysata Kashmir, taasoo u horseeday muran weyn. Kangana ayaa isbuucii lasoo dhaafay si kadis ah kusoo gashay magaalada Mumbai, iyadoo amaanka aad u xoogan ay la timid walaasheed iyo maareeyaha Rangoli Chandel. Isla maalintaas, qayb ka mid ah xafiiskeeda oo ku yaal Bandra waxaa baabi’iyey Shirkadda Dawladda Hoose ee Brihanmumbai, ka dib markii ay siiyeen ogeysiis ah ‘dhisme sharci darro ah’.
Xafiiskeyga waxaa si kadis ah loogu aqoonsaday sharci daro 24-kii saac ee la soo dhaafay, waxay burburiyeen wax walba oo gudaha ku jiray oo ay kujiraan alaabta guriga iyo nalalka hadana waxaan hanjabaad la iigu sheegay inay gurigeyga imaan doonaan sidoo kalena ay ja jabi doonaan, waan ku faraxsanahay xukunkeyga ku aadan filinka maafiyada aduunka ugu fiican. CM wuu saxsanaa,
”Kangana waxay la wadaagtay jawaab celinta. Intii ay joogtay, Kangana waxay sidoo kale la kulantay hawlwadeennada Karni Sena iyo sidoo kale wasiirka midowga Ramdas Athawale.’ Kangana waxay la kulantay barasaabka Maharashtra ‘cadaalad’ Tan iyo markii lagu dhawaaqay xiritaanka bishii Maarso, Kangana waxay ku sugneyd Manali iyada iyo qoyskeeda. Waxay dhawaan ku biirtay waxayna sii wadaa inay ka dhiibato ra’yigeeda kulul warbaahinta bulshada.